Xagaaga 2022 - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Cuntada bilaashka ah samarak! Juun 20 - Agoosto 12, 2022.
Yadoo aan loo eegin haddii ardaygaagu u qalmo cunto bilaash ah ama qiimo jaban ah, qoysaska oo dhan waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay dhammaystiraan Codsashada cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban. Codsiga Barnaamijka Faa'iidooyinka Waxbarashada wuxuu kaa caawinayaa bixinta maalgelin muhiim ah DHAMMAAN dugsiyada Degmada 196.
HEL MACLUUMAAD DHEERAAD AH
"Every Meal" bixinta bacaha cuntada bilaashka ah ee degmo kasta 196
Bacaha cuntada bilaashka ah ee fasaxa usbuuca ayaa qoysaska laga heli doonaa xagaagan dugsi kasta oo degmo 196 iyo saddex xarumo waxbarasho. Degmadu waxay la shaqaysay " Every Meal ", hore "Sheridan Story", si aad u bixiso bacaha la qabto oo taga ee cuntada aan halasanayn.
Laga bilaabo Isniinta, Juun 13, "Every Meal" waxay samayn doontaa cunto geyn toddobaadle ah oo waxay dhigi doontaa qolka fadhiga ee goob dugsi kasta. Qoysasku way iman karaan oo soo qaadi karaan iyaga oo aan qof shaqaale ahi u baahnayn inuu joogo si uu wax u qaybiyo. Bacaha waxaa la soo qaadan karaa Isniinta ilaa Khamiista.
Saacaduhu way kala duwanaan karaan goob kasta, qoysaska waxaa lagu dhiirigelinayaa inay hubiyaan meesha ugu habboon saacadaha saacadaha la soo saari karo bacaha.
Xubinnimada xagaaga YMCA ee ARDAYDA Fasalada 9-12
Ardayda galaya fasalada 9 ilaa 12 waxay xaq u leeyihiin inay iska diwaan geliyaan xubinimada YMCA xagaagan iyagoo u maraya barnaamijka "Helo Xagaaga" ururka. Kuraydu waxa ay tagi kari doonaan 20 goobood oo YMCA da Waqooyiga ah si ay ugu raaxaystaan kubadda kolayga, barkadaha dabaasha, biyo ku bood-boodida, rugaha fayadhowrka, fasallada kooxaha wada jimicsiga iyo Wi-Fi bilaash ah iyo waxyaabo kale!
Xubinimadu waxay shaqeysaa May 31 illaa Ogosto 31, 2022. Wax badan baro oo isdiiwaangeli
Ardaydu waxay haysan doonaan iPad-yadooda ay degmadu siisay xagaaga oo dhan. Arintaani waxay u ogolaanaysaa in fursadaha waxbarashadu ay usii socdaan sidii loo baahnaa inta lagu jiro xagaaga. Ka qoys ahaan, waxaad sidoo kale dooran kartaan in aad iPad-ka dhigtaan meel amaan ah ilaa dugsigu dib uga furmayo. Sida macalimiintu ay u maamulayaan iPad-yada fasalka dhexdiisa, waxaad adinkuna ka waalid ahaan/mas’uul ahaan maamulaysaan aadna la soconaysaan qalabka casriga ah ee guriga lagu isticmaalayo.
Diyaarinta Qorshaha Warbaahinta ee Qoyska
Fursadaha Waxbarashada inta lagu jiro xagaaga
Yaraynta Wakhtiga lagu bixinayo Daawashada iPad-yada Ardayga - Diyaarinta Hore
Codsashada Kaalmo Farsamo
Ayada oo helitaanka aaladaha casriga ah ee dheeraadka ah ay noqon karto mid waxtar leh, waxaa sidoo kale muhiim ah in la diyaariyo hagitaano iyo filashooyin ku saabsan isticmaalkooda qaab ammaan ah mas’uuliyadna kujirto. Hoos waxaad ka helaysaa qaababka kaa caawinaya diyaarinta qorshaha warbaahinta qoyska. Hal istiraatiijiyad oo gacan ka gaysan karta hagitaanka wadasheekaysiga ku saabsan filashooyinka xagaaga waa in la sameeyo qorshaha warbaahinta qoyska ayada oo la bookhanayo bit.ly/3G7ovVL. Qoraalka, Isticmaalka Warbaahinta ee Caruurta Maraysa Da’da Dugsiga iyo Xiliga Qaangaarka, Machadka Maraykanka ee Dhallaanku wuxuu soo jeedinaya:
Caruurta/da’ yartu waa in ay qaataan 1ka saac ee jimicsiga ah ee maalinlaha ah ee lagu taliyay iyo hurdo ku filan (8-12 saacadood maalinkii);
Caruurta/da’yartu waa in aysan qalabka kula seexan sariirtooda, qalabkaas oo ay kamidka yihiin telefishinada, kombuyuutarada, tabletyada iyo teleefoonada casriga ah;
Diyaarinta wakhtiyo warbaahintu ka maqan tahay (sida inta lgu jiro xiliyada cuntada iyo hurdada) iyo goobaha (sida qolka jiifka iyo kurshiinka);
Wadahadal joogto ah oo caruurta lagala yeesho u isticmaalka aaladaha casriga ah arimaha bulshada, iyo
Diyaarinta shabakad dad waaweyn ah oo lagu aamino kuwaas oo caruurta/da’ yarta kala falgali kara baraha bulshada kuwaas oo ay raadsadaan haaddii/markii ay caqabado la kulmaan.
Qaar kamid ah aaladaha furashada ku xiran sida Dreambox iyo IXL waxay sii wadi doonaan in ay sii shaqeeyaan ayada oo la isticmaalayo macluumaad galitaan oo iskumid ah sannad dugsiyeedka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara waxyaabo gaar u ah ardayda aan iska qorayn ama aan u wareegayn dugsi kale. Epic waxaa la gali karaa inta u dhexaysa saacadaha 7 subaxnimo - 3 galabnimo Isniinta-Jimcaha ayada oo la isticmaalayo macluumaadka lagu galayo oo lamid ah kii sannad dugsiyeedka.
Waxbarashadu waxay ka dhici kartaa gudaha iyo banaanka fasalka waxayna gaari kartaa ilaa bilaha xagaaga sidoo kale. Sida caadiga ah, iPad-yadu waxay il muhiim ah u yihiin in ardaydeennu ay mashaariicdooda diyaarsadaan. Waxaa jira aalado kala duwan kuwaas oo gacan ka gaysan kara sare u qaadidda hal abuurka ardayda inta lagu jiro xagaaga kuwaas oo macalinkoodu ku baro fasalka dhexdiisa. Ardaydu waxay si maskaxaysan u isticmaali karaan aaladahaan si ay u bartaan, u abuuraan, una sahmiyaan mowduucyada ay danaynayaan iyo waxyaabaha ay danaynayaan si ay u xoojiyaan waxbarashadooda. Tusaalooyinka waxaa kamid noqon kara:
Book Creator: (Buug Samaynta:) Waxay samaysan karaan buugaagtooda kuwaas oo faahfaahinaya waxyaabihii ay xagaaga barteen
Clips: Waxay diyaarinayaan muuqaal ku saabsan buugga ay akhriyeen iyo mowduuca ay barteen
PicCollage: Waxay xasuusanayaan xiliyada ay jecelyihiin ee dugsiga ama xerada ayaka oo isticmaalaya albuno casri ah
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha caawiya waxbarashadaan iyo casharada caawinaya ka eeg Websaytka 1:1 ardayga halkaan bit.ly/3yTxAA2.
Degmada 196 waxay xaddidaysaa aaladaha iPad-ka ee ay ardaydu la soo degi karaan waxayna isticmaashaa kala miirid dhanka websaytyada ah si looga reebo qaar kamid ah waxyaabaha internetka kujira. Waalidiinta/mas’uuliyiintu waxay sidoo kale awood u leeyihiin in ay xanibaado dheeraad ah kusoo daraan isticmaalka iPad-ka ee ardaygooda.
Furista Xiliga Shaashadda la daawanayo:
gal iPad-ka ardaygaaga adiga oo isticmaalaya koodhka uu ku galo.
Tag Settings kaddibna taabo Screen Time(Xiliga Daawashada), kaddibna Turn on Screen Time(Fur Xiliga Daawadshada).
Taabo This is My Child's iPad(Kani waa iPadka Canuggayga).
Usii gudub Downtime(Xiliga Daminta) iyo App Limits(Xadididda Aaladda) adiga oo ku salaynaya rabitaanka qoyskaaga.
Downtime(Xiliga Daminta) wuxuu waalidiinta siinayaa khiyaar ay ku daminayaan iPad-ka wakhti u cayiman (sida kahor xiliga hurdada). Ilaa in aad aaladaha kusoo darsato liiska “Always Allowed”(“Had iyo jeer Ogolow”) maahane, majiro wax iPad-ka kamid ah oo shaqaynaya inta lagu jiro muddada loogu tala galay dansanaanta.
App Limits(Xaddidaadda Aaladdu) waxay kuu ogolaanaysaa in aad xaddiddo isticmaalkaa noocyada kala duwan ee aaladaha. Inta badan aaladaha laga helo iPad-yada ardayda waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyin waxbarasho, marka arintaanu ma noqon doonto mid muhiim ah.
Samayso lambarsireed shaashadda aad ku gasho marka lagu faro sidaas (soo jeedin). Samayso lambar sireed 4 tiro ka kooban lama wadaagi doontid canuggaaga. Laba jeer gali si aad uga shaqaysiiso lambarsireedka. (Ogsoonow: Haddii aad hilmaantu lambarsireedkaaga, fadlan la xiriir dugsiga waana lagaa tirtirayaa.)
Dib usoo ceshashada Lambarsireedka Xiliga Daawashada waxaa lagu hagi doonaa Aqoonsiga Apple-ka Looma baahna in aad Aqoonsiga Apple-ka galiso, dooro Cancel(Jooji) qaybta bidix ee kore kaddibna riix Skip(Ka gudub).
Muhiim: Marka aad dhammayso, riix batoonka wareegsan ee bogga hore si aad uga baxdo Xiliga Daawashada. Arintaani waxay aqiijinaysaa in isbadaladaada iyo baaswaarkaagu yihiin kuwo xafidan.
Si aad u yarayso waxyeelada ku imaan kara qalabka, waxaa laguugula talinayaa in aad ku xafiddo goob ammaan ah marka aan loo isticmaalayn ujeedooyin waxbarasho. Haddii aad u baahantahay kaalmo farsamo oo lagaa siiyo aaladda casriga ah ee canuggaaga xagaagaan, oo ay kamid yihiin dayactirka, tag https://www.district196.org/techhelp si aad u buuxiso foomka codsiga kaalmada teknoolojiyadda qof ayaana kula soo xiriiri doona.
Bookho bit.ly/3aicXmK si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka iyo isticmaalka iPad-ka.
Haddii aad u baahan tahay inaad nadiifiso shaashadda, isticmaal kaliya maro nadiif ah, jilicsan, qalalan. Ha isticmaalin wax nadiifiyaha dareeraha ah nooc kastaba ha ahaatee. Ma jiraan masaxaha bakteeriyada qoyan, nadiifiyaha ama maro qoyan.